Inona marina no ataon'ny masoivoho dokambarotra?
خانه/طراحی و سئو وب سایت/Inona marina no ataon’ny masoivoho dokambarotra?
Inona marina no ataon’ny masoivoho dokambarotra?
Ny vato fehizoron’ny masoivoho dokam-barotra dia mpanjifa malaza. Ny mpanjifa dia ahitana orinasa sy orinasa, fikambanana tsy mitady tombony ary masoivohom-panjakana ary matetika izahay no karamaina hamokatra fampielezan-kevitra amin’ny haino aman-jery vaovao maro karazana. Raha mametra ny vola sy ny karazana serivisy atolony ny masoivoho dokam-barotra sasany. Ny masoivoho toy izany dia matetika manolotra iray na roa amin’ireo tolotra fototra. Ohatra, na dia manolotra tolotra drafitra stratejika momba ny dokam-barotra aza ny masoivoho sasany izay manam-pahaizana manokana amin’ny “mamorona”, dia ny famoronana dokambarotra no tena mahaliana azy ireo. Toy izany koa, ny sasany amin’ireo “serivisy fividianana media” dia manolotra serivisy fandrindrana ny haino aman-jery saingy mifantoka amin’ny fividianana media, fametrahana ary faktiora. Amin’ny lafiny iray, ny McKenna Agency dia manana fizarana 5 manokana;
1) Sary sy horonan-tsary Avaratra-Andrefana – Horonan-tsary HD sy serivisy Photography Stock,
2) Ny Web Masters – serivisy famolavolana tranonkala mandroso ara-teknika sy tena hita maso,
3) System Interactive Communications – tolotra varotra amin’ny milina fikarohana
4) Avondale Studio – serivisy fandraketana feo sy mozika ara-barotra ary
5) Systemic, Inc – fampivoarana fandaminana sy serivisy consulting momba ny fandraharahana mifandraika amin’izany.
Rehefa misafidy ny hampiasa masoivoho dokam-barotra amin’ny serivisy voafetra ny mpanjifa, dia tsy maintsy mandray ny sasany amin’ireo hetsika fandrindrana sy fandrindrana ny dokam-barotra izay karakarain’ny masoivoho dokam-barotra feno serivisy. Noho izany, ny mpanao dokam-barotra izay mampiasa sampan-draharaha voafetra dia mandray andraikitra lehibe kokoa amin’ny asa drafitra stratejika, manome tari-dalana stratejika lehibe kokoa ho an’ireo masoivoho manam-pahaizana manokana momba ny famoronana na ny haino aman-jery, ary mampihatra fifehezana bebe kokoa amin’ny vokatra avy amin’ireo masoivoho manokana ireo, miantoka fa tsara ny hetsika samihafa ataon’izy ireo. -milamina sy -mirindra.
Ho fanampin’ireo masoivoho dokam-barotra amin’ny serivisy feno, misy ihany koa ireo masoivoho manokana amin’ny karazana dokam-barotra manokana: fandraisana mpiasa, mila fanampiana, fitsaboana, sokajy, indostrialy, ara-bola, valiny mivantana, varotra, pejy mavo, teatra. / fialamboly, fampiasam-bola, fitsangatsanganana, sy ny sisa. Amin’ny ankapobeny dia tsy mifantoka amin’ny indostria manokana ny masoivohontsika.
Mitranga amin’ny sehatra toy izany ny specialization noho ny antony samihafa. Matetika, toy ny amin’ny dokam-barotra momba ny fandraisana mpiasa, ohatra, ny fampitam-baovao manokana na ny fampitam-baovao dia tafiditra ao izay mitaky fahalalana sy fahaiza-manao izay tsy hita matetika amin’ny masoivoho an-tserasera. Amin’ny toe-javatra hafa, toy ny dokam-barotra ara-pitsaboana na indostrialy, ny lohahevitra dia ara-teknika ary mitaky fanofanana ny mpanoratra sy ny mpanakanto mba hanoratana hafatra dokam-barotra manan-danja momba izany.
Ny masoivoho dokam-barotra manokana toy izany dia matetika “serivisy feno”, satria izy ireo dia manolotra ny serivisy sampan-draharahan’ny dokam-barotra fototra rehetra ao amin’ny faritra misy azy manokana miampy serivisy dokam-barotra periferika mifandraika amin’ny faritra misy azy.
Ny serivisy ifanakalozan-kevitra dia manavaka ny tenany amin’ny alàlan’ny fanolorana fifangaroana amin’ny famolavolana tranonkala/fampandrosoana, fivarotana milina fikarohana, dokam-barotra amin’ny Internet, na consulting e-business/e-varotra. Ny masoivoho ifanakalozan-kevitra dia nanjary nalaza talohan’ny nandraisan’ireo masoivoho dokam-barotra nentim-paharazana tanteraka ny Internet. Manolotra tolotra isan-karazany, ny sasany amin’ireo masoivoho ifandrimbonana dia nitombo haingana dia haingana, na dia nihena haingana toy izany aza ny sasany noho ny fiovan’ny toetry ny tsena. Amin’izao fotoana izao, ireo masoivoho ifanakalozan-kevitra mahomby indrindra dia voafaritra ho orinasa manome serivisy dokam-barotra sy varotra manokana ho an’ny habaka nomerika.
Ny habaka dizitaly dia faritana ho fantsona elektronika misy multimedia izay azo jerena na henoina ny hafatry ny mpanao dokambarotra. Ny ‘espace digital’ dia adika amin’ny Internet, kiosk, CD-ROM, DVD, ary fitaovana momba ny fiainana (iPod, PSP, ary finday). Miasa mitovy amin’ny masoivoho dokam-barotra ny masoivoho ifandrimbonana, na dia mifantoka fotsiny amin’ny serivisy dokam-barotra ifandrimbonana izy ireo. Izy ireo dia manolotra serivisy toy ny paikady, famoronana, famolavolana, horonan-tsary, fampandrosoana, fandaharana (Flash sy ny hafa), fametrahana, fitantanana ary tatitra momba ny fanatanterahana. Matetika, ny masoivoho ifanakalozan-kevitra dia manome: famokarana nomerika, fampivoarana marika nomerika, tetikady ara-barotra sy fifandraisana, fanentanana media manankarena, traikefa momba ny marika video interactive, famolavolana sy fampivoarana tranokala Web 2.0, Fitaovana e-learning, marketing mailaka, serivisy SEO/SEM, PPC fitantanana fampielezan-kevitra, serivisy fitantanana votoaty, fampivoarana fampiharana amin’ny tranonkala, ary ny fitrandrahana angon-drakitra ankapobeny & fanombanana ROI.
Ny fampisondrotana vao haingana amin’ireo masoivoho ifanakalozan-kevitra dia azo ampifandraisina amin’ny fitombon’ny lazan’ny tambajotra sosialy sy tranokalam-piarahamonina. Ny famoronana vohikala toy ny MySpace, Facebook ary YouTube dia niteraka fahalianana amin’ny tsena, satria ny masoivoho mpanelanelana sasany dia nanomboka nanolotra ny fampandrosoana ny tranokalan’ny vondrom-piarahamonina manokana sy ny orinasa ho toy ny iray amin’ireo tolotr’asany. Mety mbola aloha loatra ny hilazana ny fomba hampiasan’ny masoivoho ity karazana varotra ity mba hahazoana vola amin’ny ROI mpanjifa, saingy ny famantarana rehetra dia manondro ny tambajotra an-tserasera ho toy ny hoavin’ny varotra marika ary ny Interactive no fototry ny paikady momba ny fifandraisana sy ny varotra an’ny Brand.
Noho ny fipoahan’ny tambajotra sosialy, karazana orinasa vaovao no manao fitantanana laza. Ity karazana masoivoho ity dia manan-danja indrindra raha mila fanaraha-maso ny fahasimbana amin’ny Internet ny orinasa iray. Raha tsy afa-po ny mpanjifa iray, dia mora ny manimba ny lazan’ny orinasa amin’ny tranokalan’ny tambajotra sosialy. Noho ny haingan’ny fiparitahan’ny vaovao, dia tena ilaina ny miatrika avy hatrany izay tsaho, fifosana na gazety an-tserasera ratsy hafa.
Serivisy milina fikarohana
Tato ho ato, nosokajian’ny sasany ho ‘sampan-draharaha’ ny orinasam-pikarohana pay per click (PPC) sy (SEO) satria izy ireo no mamorona haino aman-jery sy mampihatra ny fividianana media amin’ny doka mifototra amin’ny lahatsoratra (na sary, amin’ny toe-javatra sasany amin’ny varotra fikarohana). Ity indostria somary tanora ity dia nitaredretra tamin’ny fampiasana ny teny hoe ‘agence’, saingy amin’ny famoronana doka (na lahatsoratra na sary) sy ny fividianana media, dia mahafeno fepetra ara-teknika amin’ny maha-“sampan-draharahan’ny dokam-barotra” izy ireo.
Tolotra media sosialy
Ny masoivohon’ny media sosialy dia manokana amin’ny fampiroboroboana marika amin’ny sehatra media sosialy isan-karazany toy ny bilaogy, tranokalan’ny tambajotra sosialy, tranokala Q&A, sehatra fifanakalozan-dresaka, bilaogy bitika sns. Ny tolotra fototra roa an’ny masoivoho media sosialy dia:
• marketing media sosialy
• fitantanana laza an-tserasera
Serivisy fifandraisana ara-dalàna
Fifandraisana ara-dalàna atolotra amin’ny alàlan’ny pirinty, horonan-tsary, tranonkala ary fifandraisana finday ho an’ny serivisy ara-barotra sy famelabelarana lalana ho an’ny orinasa rehetra amin’ny sehatra mifandraika amin’ny Lalàna.
Serivisy fifandraisana ara-pahasalamana
Ny masoivohon’ny fifandraisana ara-pahasalamana dia manam-pahaizana manokana amin’ny fifandraisana stratejika sy serivisy ara-barotra ho an’ny indostrian’ny Healthcare sy Life Science. Ireo masoivoho ireo dia manavaka ny tenany amin’ny alàlan’ny fahatakarana ny torolàlana momba ny fametahana marika sy ny fivarotana henjana napetraky ny US Food and Drug Administration (FDA) sy ny tari-dalan’ny vondrona indostrialy, indrindra indrindra ADVAMED sy PHARMA.
Ireto misy ohatra miavaka: Dudnyk
Serivisy fanabeazana ara-pitsaboana
Ny masoivoho fanabeazana ara-pitsaboana dia manokana amin’ny famoronana votoaty fanabeazana ho an’ny indostrian’ny Healthcare sy Life Science. Ireo masoivoho ireo matetika dia manokana amin’ny iray amin’ireo sehatra roa:
•Fanabeazana fampiroboroboana – fitaovam-pampianarana sy fanofanana mifamatotra amin’ny fampiroboroboana vokatra na fitsaboana iray
• Fanabeazana ara-pitsaboana mitohy – fitaovam-pampianarana sy fanofanana nahazoana alalana noforonina ho an’ny fanabeazana ara-pitsaboana sy mpitsabo.
Ny atidoha havia sy havanana
Na dia tsy serivisy masoivoho dokam-barotra toy izany aza, ny serivisy teknolojian’ny orinasanay matetika dia miara-miasa amin’ny serivisy dokam-barotra mba hanomezana ampahany amin’ny serivisy manokana toy ny atolotry ny Web 2.0 ny famolavolana sy ny fampandrosoana ny tranokala, ny rafi-pitantanana votoaty, ny fampivoarana ny fampiharana amin’ny Internet, ary ny intuitive hafa. vahaolana teknolojia ho an’ny tranonkala, fitaovana finday ary sehatra nomerika vao misondrotra.
Sampan-draharahan’ny masoivoho ankapobeny
Ny olona mamorona doka tena izy no fototry ny masoivoho dokam-barotra. Ny masoivoho dokam-barotra maoderina dia mazàna mamorona ny mpanoratra sy ny talen’ny zavakanto ho ekipa mpamorona. Ny ekipa mpamorona dia mety ho fiaraha-miasa maharitra na miforona araka ny tetikasa tsirairay. Ny talen’ny zavakanto sy ny mpanoratra mpanoratra dia mitatitra amin’ny talen’ny famoronana, matetika mpiasa amin’ny famoronana manana traikefa an-taonany maro. Na dia manana ny teny hoe “manoratra” ao amin’ny lohatenin’ny asany aza ny mpanao kopia, ary ny talen’ny zavakanto dia manana ny teny hoe “kanto”, ny iray dia tsy voatery manoratra ny teny ary ny iray manao sary; izy ireo dia samy mamorona hevitra mamorona hanehoana ny soso-kevitra (ny dokam-barotra na ny hafatra fototra amin’ny fampielezan-kevitra). Ny sampan-draharahan’ny famoronana dia miara-miasa matetika amin’ny trano famolavolana na famokarana ivelany mba hamolavola sy hampihatra ny heviny. Ny departemanta famoronana dia afaka mampiasa mpanakanto mpamokatra ho toerana fidirana, ary koa ho an’ny fampandehanana sy fikojakojana. Ny dingana famoronana no ampahany manan-danja indrindra amin’ny fizotran’ny dokam-barotra.
Ny masoivoho dia manendry mpitantana kaonty hifandray amin’ny mpanjifa. Ny mpitantana kaonty dia mila mahafantatra tsara ny filan’ny mpanjifa sy ny fanirian’ny mpanjifa izay azo ampianarina amin’ny mpiasan’ny masoivoho ary tokony hahazo fankatoavana avy amin’ny mpanjifa momba ny tolo-kevitry ny masoivoho ho an’ny mpanjifa. Ny fahaiza-mamorona sy ny fahaiza-mamorona no faritra ilain’ny olona serivisy mpanjifa. Miara-miasa akaiky amin’ireo manampahaizana manokana amin’ny sehatra tsirairay izy ireo.
Mety tsy dia fantatra loatra ny departemantan’ny serivisy fampahalalam-baovao, fa ny mpiasa ao aminy dia olona manana fifandraisana amin’ireo mpamatsy media famoronana isan-karazany. Ohatra, afaka manoro hevitra sy mifampiraharaha amin’ny mpanonta izy ireo raha misy masoivoho mamokatra flyers ho an’ny mpanjifa. Na izany aza, rehefa mifandray amin’ny haino aman-jery lehibe (fampielezam-peo, ivelany, ary ny gazety), ity asa ity dia matetika avy amin’ny masoivohon’ny haino aman-jery izay afaka manoro hevitra momba ny fandrindrana ny haino aman-jery ary amin’ny ankapobeny dia lehibe ampy hifampiraharahana ny vidiny midina lavitra noho ny masoivoho iray na mpanjifa. afaka.
Raha tsy misy ny sampana famokarana, ny dokam-barotra noforonin’ny mpanoratra sy ny talen’ny zavakanto dia tsy inona fa teny sy sary amin’ny taratasy. Ny sampan-draharahan’ny famokarana, raha ny tena izy, dia miantoka ny famokarana dokambarotra amin’ny fahitalavitra na dokam-barotra, sns. Izy ireo no tompon’andraikitra amin’ny fifanekena amin’ireo mpivarotra ivelany (mpitarika sy orinasa mpamokatra amin’ny resaka dokam-barotra amin’ny fahitalavitra; mpaka sary sy trano fandrafetana amin’ny resaka dokambarotra an-tsoratra na mailaka mivantana). Ny mpamokatra dia mandray anjara amin’ny lafiny rehetra amin’ny tetikasa iray, manomboka amin’ny fampahafantarana famoronana voalohany ka hatramin’ny fanatanterahana sy ny fandefasana. Any amin’ny masoivoho sasany, ny mpamokatra zokiolona dia fantatra amin’ny anarana hoe “mpamokatra mpanatanteraka” na “mpanamboatra votoaty”.
Ny masoivoho maoderina dia mety manana sampan-draharaha momba ny fandrindrana ny haino aman-jery mitambatra, izay manao ny drafitra sy ny fametrahana ny toerana rehetra.
mpiasa; mahay manova satroka
Amin’ny maha sampan-draharaha kely azy; Ny mpiasa dia afaka manao asa famoronana sy kaonty toy ny asa famokarana, dokam-barotra amin’ny Internet, drafitra, na fikarohana, ohatra; sampan-draharaha adino matetika, nefa tsy misy afa-tsy, ao anatin’ny masoivoho dokam-barotra dia fifamoivoizana. Ny sampan-draharahan’ny fifamoivoizana no mandrindra ny fandehan’ny asa ao amin’ny masoivoho. Matetika izy io dia tarihin’ny mpitantana fifamoivoizana (na mpitantana ny rafitra). Ny fifamoivoizana dia mampitombo ny fahombiazan’ny masoivoho sy ny tombom-barotra amin’ny alàlan’ny fampihenana ny fanombohana asa diso, ny fanombohana asa tsy mety, ny fifampizaràna vaovao tsy feno, ny fanombanana ny vidiny mihoa-pampana, ary ny filàna fanitarana ny media. Ao amin’ny sampan-draharaha madinika tsy misy mpitantana ny fifamoivoizana manokana, ny mpiasa iray dia mety ho tompon’andraikitra amin’ny fitantanana ny fizotran’ny asa, manangona tombantomban’ny vidiny ary mamaly ny finday, ohatra. Ny masoivoho lehibe dia mety manana departemantan’ny fifamoivoizana misy mpiasa dimy na mihoatra.
• Fikarohana sy famakafakana: Fanangonana vaovao momba ny indostria, ny fifaninanana, ny vokatra na serivisy ho an’ny mpanjifa; ary koa ny fanolorana ny valiny amin’ny endrika am-bava/soratra miaraka amin’ny tolo-kevitra
• Fandraisana anjara amin’ny fivoriana anatiny ary, raha mety, fivorian’ny mpanjifa
• Manampy ny tolotra kaonty amin’ny fitantanana ny tetikasa famoronana
Matetika ny interns no mandray anjara amin’ny fizotran’ny famoronana anatiny, izay mety hiampangana azy ireo amin’ny famoronana sy fitantanana tranonkala ary koa amin’ny famolavolana fanentanana dokam-barotra. Ny tetik’asa tanana toy ireny dia manampy ireo mpianatra hianatra ny fomba ilain’ny tetikady sy ny varotra mivoatra tsara amin’ny drafitry ny dokam-barotra sy ny fifandraisana tsara.
Mandritra ny fotoam-piasany dia hiaina ny fivoaran’ny dokambarotra, bokikely ary tetik’asa fampielezam-peo na fifandraisana manomboka amin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ny mpianatra. Nandritra ny internship, ny intern dia tokony hampahafantarina araka izay azo atao ao anatin’ny masoivoho sy ny dingan’ny dokam-barotra.
استراتژی های بازاریابی اجتماعی برای رشد بازاریابی آنلاین